Summer Vibes in Kanchanaburi
နွေရာသီမှာ ရေဆော့ အပန်းဖြေဖို့အကောင်းဆုံး ကန်ချနာဘူရီ
ကျွန်တော်တို့ နွေရာသီ ဆိုတာနဲ့ အပန်းဖြေဖို့ အပြေးအလွှားစဉ်းစားကြရတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း ပူတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အပူရှောင်ရင်း တောင်ပေါ်ရာသီဥတုလေး ခံစားတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပင်လယ်ရေလေးနဲ့ ထိတွေ့ပြီး ရေဆော့ အပန်းဖြေတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ ခုတော့ နောက်ထပ် ရေဆော့ပြီး ပျော်လို့ရမဲ့ ခရီးစဉ်ကို စဉ်းစားလို့ ရသွားပြီ။
အဲ့ဒါက ထိုင်းနိုင်ငံ က ကန်ချနာဘူရီဒေသဘက်ကို ရေပေါ်ဟိုတယ်လေးတွေကို Hotel Hopping လုပ်ရင်း Water Sports နဲ့ Water Activities တွေ (ရေနဲ့ကစားရတဲ့ အားကစားနည်းနဲ့ ရေကူးပျော်ရွှင်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေ) ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။ ရေမကူးတတ်ဘူးလို့ စဉ်းစားနေတယ်မို့လား။ ကျွန်တော်လည်း ရေမကူးတတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုခရီးစဉ်က အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီး တွေးပူမနေနဲ့၊ ကျွန်တော်လည်း Life Jacket ဝတ်ပြီး အသားကုန် ကဲတာ ဆော့တာပါပဲ။ Safety ပိုင်းစိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမို့ ကျွန်တော် လုပ်ရဲတာပါ။ ခရီးစဉ်လေးအကြောင်း ပြန်ပြောပြဖို့ သွားခဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ စဉ်းစားရင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် ချက်ချင်းပြန်ထ သွားချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်။
ကန်ချနာဘူရီ ကို အပေါ်လမ်းက သွားလား၊ အောက်လမ်းက သွားလား
ကမ္ဘာအနှံ့ကနေလာပြီး ကွေမြစ်ပေါ်မှာ ရေဆော့နေကြသူများ
ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံး ကန်ချနာဘူရီ ဒေသ အကြောင်းလေး ပြောရမယ်။ ဒီအရပ်က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်း ထားဝယ်ကနေ သွားရင် ၄ နာရီ ကားမောင်းရတဲ့ ခရီးလောက်ပဲ ရှိပေမဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် လက်မှတ် လုပ်ဆောင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာတစ်ခုအထိပဲ ဝင်ခွင့်ရမှာမို့ အဲ့ဒီထက်ကျော်သွားတာ သိလို့ မိခဲ့ရင် ဒါဏ်ရိုက်တာတွေ၊ အချုပ်ကျတာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ အစစ်အဆေး မရှိတဲ့ကာလတွေ ရှိတတ်တော့ လွတ်သွားတဲ့အခါတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်လမ်းက သွားတာထက် ပိုပြီး သေချာ စိတ်ချရမဲ့ လေကြောင်းနဲ့ သွားတာကို အားပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကတော့ MNA လေယာဉ်နဲ့ပါ။ မနက် စောစော လေယာဉ်မို့ ဘန်ကောက်ကို စောစော ရောက်ပြီး Suvanabhumi လေဆိပ်ကို ဆင်းတာကြောင့် ကန်ချနာဘူရီကို ဆက်ထွက်ဖို့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Don Mueang လေဆိပ်ကနေဆို နည်းနည်းပို ဝေးနိုင်တယ်။ လေဆိပ်ကနေ ကားနဲ့ ကန်ချနာဘူရီကို ၃ နာရီလောက် စီးပြီး ရောက်လာနိုင်တယ်။ လမ်းက အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ ခပ်မြန်မြန် ရောက်သွားသလို၊ လမ်းမှာလည်း ရှုခင်းတိုက်တာအဆောက်အဦးတွေ ကြည့်ရင်း သွားကြရတော့ သိပ်ပျင်းစရာ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့တော့ ရယ်စရာတွေ ပြော၊ စရင်း နောက်ရင်းနဲ့ ရောက်သွားတာပါပဲ။
သဘာဝဆန်တဲ့ River Kwai Jungle Rafts ဟိုတယ်
ရေစီးသွက်တဲ့ ကွေမြစ်ပေါ်မှာ ရေပေါ်ဟိုတယ်လေးတွေ အစုလိုက် အစုလိုက် ဟိုနေရာ ဒီနေရာ တွေ့ရတတ်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆို ကျွန်တော်တို့ဆီက အင်းလေး လိုပဲ။ မြစ်ကြောင်း ရှည်ရှည်လေးမှာ တည်းခိုဆောင်လေးတွေကို ဘေးကပ်လျက် ရှည်ရှည်လေး ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာမို့ ချစ်စရာကောင်းနေတယ်။ ဟိုတယ်အများစုက ရေထဲကို တိုင်စိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ဗောတံတားလိုမျိုးပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့ တည်းခိုဆောင်ထဲ နေရင်းနဲ့ကို ရေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ခံစားနေရမှာပါ။ သင်္ဘောစီးရတဲ့ အရသာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေကြားတည်းမှာ အခန်းခဈေးလည်းများသလို သဘာဝအရမ်းဆန်တဲ့ Jungle Rafts ဟိုတယ်က နိုင်ငံခြားသားတွေ အကြိုက်များပါတယ်။ အကြောင်းရင်း သိရင် အံ့သြလောက်မယ်။ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်မရှိတဲ့ သဘာဝအရမ်းဆန်တဲ့ ဟိုတယ်မို့ပါတယ်။ ဒီနေရာက အမြဲလိုလို Booking ပြည့်နေတတ်တယ်။ ဒီမှာ မြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်းတချို့ရှိပေမဲ့ မြန်မာစကားတော့ မရည်လည်ကြဘူး။ တချို့လောက်ပဲ ပြောတတ်ကြတယ်။
ဒီဟိုတယ်လာဖို့ကို မြစ်ဆိပ်တစ်ခုကနေ လှေ မိနစ် ၂၀ လောက် စီးလာရပါတယ်။ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်က တခြားဟိုတယ်တွေကိုလည်း မြင်တွေ့လေ့လာရသလို၊ မြစ်တွင်း ရေကူးရေဆော့နေသူတွေ၊ သစ်တောနဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေကိုလည်း တွေ့ကြရပါတယ်။
ဒီမှာ အကြိုက်ဆုံးက Life Jacket ဝတ်ပြီး ရေစီးနဲ့ မျောချရတာပဲ။ ကိုယ်တွေ အဆောင်က အောက်ဘက်ရောက်တော့ ထိပ်ဘက် စားသောက်ဆိုင်ကနေ ဆင်းမျောချလိုက်ရင် အတော်ပဲ။ ရေစီးသန်ချိန်တော့ စီးရခက်မယ်။ ရေတော့ မမြုပ်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က အရမ်းရေကြောက်တာလေ။ တည်းခိုဆောင်တွေက ရေနံဆီ မီးအိမ်တွေနဲ့။ ညဘက်ကို ကောင်းကင်ကြည့်ပြီး အပြည့်ခံစားလို့ရတယ်။ အဆောင်က ၃ ခန်းတွဲ တစ်ဆောင်။ အသံတွေက ဟိုဘက် ဒီဘက် အတိုင်းသား ကြားရလောက်အောင် ထရံကာလေးတွေ။ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာ က လိုက်ကာလေးပဲ ရှိတာ။ ဘိုထိုင်အိမ်သာမို့ အဆင်တော့ပြေတယ်။
ဒီမှာ အခန်းယူရင် ညစာပါ ယူရမယ်။ ညစာလည်း သူတို့လက်ရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘားလေးလည်း ရှိပြီး ဈေးလည်း သိပ်မများဘူး။ ညဘက်ကို ညစာ ၆ နာရီလောက် စားကြရတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင် အောက်ဘက်က အဆောင်တစ်ခုမှာ Culture Show ဆိုပြီး မြန်မာအကတွေ ကပြတာ အံ့သြနေရတယ်။ အကအတွက် ဝန်ထမ်းသီးသန့်ထားပုံပါပဲ၊ အရပ်ဇာတ်ပွဲသာသာလေးပေါ့။ အဖြူတွေတော့ သဘောတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ရယ်ချင်စရာ ဖြစ်နေမယ်။ အဲ့ဒီပွဲ ကြည့်မယ်ဆိုလည်း ဈေးသက်သက်ထပ်ယူတာမို့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သဘာဝနဲ့ ညအလှကိုပဲ ကိုယ့်အခန်းရှေ့က ခုံလေးမှာ ခံစားပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီညက အိပ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ သဘာဝနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တသားတည်းကို ဖြစ်လို့။
မနက်စာကတော့ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်းပဲ ကြက်ဥကြော်၊ ပေါင်မုန့်မီးကင် တို့ပဲ စားရပါတယ်။ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒါကိုပဲ သဘောကျလို့ လာနေသူတွေက ကျွန်တော်တို့ ပြန်ခါနီးအထိ တဖွဲဖွဲဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကန်ချနာဘူရီ ပထမည ရေပေါ်ဟိုတယ်ကတော့ သိပ်ကို အရိုင်းဆန်လွန်းတဲ့ ချစ်စရာဟိုတယ်ကြီးပေါ့ဗျာ။
ပျော်စရာစုံတဲ့ ရေနန်းသဘင် Ananta River Hill Resort
နောက်တစ်ရက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကန်ချနာဘူရီက နာမည်ကျော်ဆည်ကြီး Srinagarin ထဲမှာ ဆောက်ထားတဲ့ Ananta River Hill Resort မှာ ကုန်ဆုံးကြရမှာပါ။ ဒီဟိုတယ် မရောက်ခင် တောင်ပတ်လမ်းကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ လေထိုးဘူဘောင်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေထဲဆော့စရာမျိုးစုံက ကလေးတစ်ယောက်လို စိတ်ကို မြူးတူးသွားစေတယ်။ ဒီဟိုတယ် အနီးမှာလည်း တခြားဟိုတယ်မျိုးစုံ ရှိပေမဲ့ သတိထားမိသလောက် ကျွန်တော်တို့ တည်းတဲ့ ဟိုတယ်က အကြီးဆုံးနဲ့ ဧည့်သည် အများဆုံးပါ။ Safty ပိုင်းအရ ဆိုရင်လည်း ဟိုတယ် ရေပိုင်နက် အားလုံးရဲ့ အောက်မှာ ပိုက်ကွန်အကြီးတစ်ခုကို ဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ သတိပြုမိတယ်။ ဒီဟိုတယ်က အခန်းတွေကိုလည်း ရေထဲမှာ တိုင်ချဆောက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ဗောတံတားလိုမျိုးမှာ ဆောက်တာမို့ တစ်ဆောင်လုံးက ရေထဲမှာ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဖြစ်နေပြီး သင်္ဘောစီးရသလို ဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆောင်က ကြီးပြီး ရေကလည်း ရေသေ ဖြစ်တာမို့ အရမ်းလှုပ်ခါနေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟိုတယ်ရဲ့ အခန်းတည်ဆောက်ပုံတွေက မြစ်ထဲက ဟိုတယ်နဲ့ မတူတော့ဘဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေက ဟိုတယ်ပုံစံနဲ့ တူလာတယ်။ ရှေ့လှည့် နောက်လှည့်တွေ ရှိလာတယ်။ ဈေးနှုန်းလည်း နေရာ၊ အခန်းအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး မျိုးစုံရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခန်းကတော့ အတော်ကျယ်ပြီး ရှေ့ဘက်မှာ ရေထဲတန်းဆင်းဖို့ လှေကားနဲ့ အနားယူစရာ နေရာကျယ်ကျယ် ရှိနေတယ်။ အခန်းတိုင်းရဲ့ အရှေ့မှာ Life Jacket တွေကို ပေါပေါသီသီ ထားပေးထားလို့ ကိုယ်နဲ့ တော်မယ်ထင်တာ ဝတ်ကြည့်ရုံပဲ။ ကျွန်တော်က ရေကြောက်တာမို့ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ချရတယ်ပြောပြော ကိုယ့်အခန်းရှေ့တော့ ကိုယ်မကူးရဲဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရေဆော့တဲ့နေရာမှာပဲ သွားဆော့ဖြစ်တယ်။ သဘောကျတာက ကလေးတွေအတွက် သီးသန့် ရေကူးကန်လိုမျိုး လုပ်ပေးထားတဲ့ ကစားကွင်းတစ်ခု၊ လူကြီးတွေအတွက် အပြင်ဘက်မှာ အကြီးနှစ်ခု သီးသန့်စီ ဖန်တီးပေးထားတာပဲ။
ဒီဟိုတယ်မှာ ထူးခြားချက် နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက ညနေ ၅ နာရီဆို တည်းခိုလာသူတွေ အကုန် ဖောင်တွေ ဆက်ပြီး ရထားကြီးလို စီပြီးတွဲထားတဲ့ ဖောင်ရထားပေါ်တက်လို့ ရှေ့က သင်္ဘောက ဖောင်ရထားကို ဆွဲပြီး ဆည်အလယ်မှာ နေဝင်ချိန်ခံစား ရေကစားဖို့ စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ထိုင်းသီချင်းမြူးမြူးလေးတွေ ဖွင့်ပြီး အားလုံးက ကကြခုန်ကြ ရေဆော့ကြနဲ့ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက ညစာ စားတဲ့ စားပွဲတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ရွှေငါးကြင်းကန်ရှိတာမို့ ခြေထောက်ကို ချထားပြီး မှန်စားပွဲအောက်ကနေ ငါးတွေ ရေကူးနေတာကြည့်လို့ ညစာ စားနိုင်တာပါပဲ။
မနက်စာလည်း ဘူဖေးပုံစံနဲ့ အမယ်စုံလို့ သဘောကျရတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအများစုနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ဟိုတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းထဲမှာလည်း မွန်လူမျိုးများပြီး မြန်မာစကားမပြောတတ်တောင် နည်းနည်းနားလည်း ပြန်ဖြေတတ်သူ အချို့ ရှိပါတယ်။ တည်းခဲ့သမ ျှ ဟိုတယ် (၃) ခုမှာ အကြိုက်ဆုံးဟိုတယ်ပါပဲ။
ခပ်ချေချလေး ဟန်နီးမွန်းလို့ကောင်းတဲ့ Z9 Resort
နောက်ဆုံးည ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Srinagarin ဆည်ကြီးအခြားတစ်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ ခပ်ချေချေ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ တည်းပြီး အပန်းဖြေခဲ့ကြတယ်။ သူ့ပုံစံက Maldives က ဟိုတယ်တွေလို ပုံစံမျိုး။ Luxury ဆန်လို့ ဈေးလည်းကြီးသလို၊ ဆိတ်ငြိမ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်တွေလို ဆူဆူညံညံ မရှိလှဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ မြန်မာတချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ရေကူးရုံ နဲ့ Kayak လှေလှော်ရုံလောက်ပဲ ရေကစားစရာ ရှိမယ်။ ကျန်တာကတော့ အပန်းဖြေဖို့ပေါ့။ သူက အခန်းပုံစံ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက အခန်းကျဉ်းတယ်။ တစ်မျိုးက အခန်းကျဉ်းနှစ်ခန်းစာ ကို တစ်ခန်းစာ လုပ်ထားတဲ့အကျယ်မျိုး။ မိသားစုခန်းလိုပေါ့။ အခန်းတိုင်းကို ကတ်ပြားနဲ့ သော့ဖွင့်လို့ရသလို ရေဆော့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင် လက်ပတ်နာရီလေးနဲ့ ဖွင့်တဲ့ စနစ်ကိုလည်း လုပ်ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါလေး သဘောကျတယ်။ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေ သက်သက်စီ ရှိတယ်။ နေရာတိုင်းက သူ့ဟာသူ ဥရောပဆန်ဆန် လှနေအောင် ဖန်တီးထားတယ်။ အခန်းလေးတွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကလည်း ချစ်စရာကောင်းတယ်။ အထဲမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကအစ ထူးခြားတယ်။ သူလည်း ရေထဲ တိုင်ချဆောက်တာ မဟုတ်ဘဲ ဗောတံတားလိုမျိုးပေါ်မှာ တင်ဆောက်ထားတာမို့ ရေလှုပ်ရင် လှုပ်ပါတယ်။
ညစာကို ဥရောပအစားအစာတွေ ပိုရတတ်တယ်။ သိပ်တော့ စံမမီလှဘူး။ မနက်စာတော့ အတော် ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒီကို လာတဲ့သူတွေက စုံတွဲလေးတွေများတယ်။ ခပ်ချေချေ ဟန်နီးမွန်းလာကြတဲ့ ထိုင်းစုံတွဲတွေ၊ သက်ရွယ်ရနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအတွဲတွေနဲ့ ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားအတွဲတွေ လာတာ များတယ်။ ဒီဟိုတယ်မှာ တစ်ခု ဂရုပြုရတာက ညဘက်ဆို တောခွေးတချို့ ဆင်းလာတတ်လို့ ပစ္စည်းတွေ အပြင်မှာ ကျန်ခဲ့တာမျိုး မရှိအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။ အမြဲတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားသင့်လား Tour Agent နဲ့သွားသင့်သလား?
ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုအစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး ရေးထားတာမို့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားမယ်ဆိုလည်း လွယ်ကူသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အခန်းရရှိနိုင်မဲ့ အနေအထားကတော့ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ Tour Agent တွေ ရထားတဲ့ အထူးဈေးနှုန်းမျိုး ရဖို့ မလွယ်နိုင်တာမို့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်ထက် Tour ခရီးစဉ်တွေလိုက်ပါတာက ခေါင်းစား သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဟိုတယ်တွေကို ရောက်ဖို့ကလည်း ကားနဲ့ အတော်ခရီးနှင်ရမှာမျိုးမို့ ကားခကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါဦးမယ်။ ဒါ့အပြင် အစားအသောက်ကလည်း အပြင်မှာ ထွက်စားဖို့ အဆင်မပြေဘဲ ဟိုတယ်မှာ စားမှသာ ရနိုင်မဲ့ နေရာတွေချည်းမို့ အစားအသောက်အတွက် ကုန်ကျမဲ့ပမာဏကိုလည်း ထည့်သွင်း တွက်ချက်ကြရဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ထက် Tour နဲ့သွားတာ ပိုအဆင်သင့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဘယ် Tour ခရီးစဉ်နဲ့ လိုက်ပါမလဲ။ ဈေးနှုန်းကရော?
လက်ရှိ ကန်ချနာဘူရီ ခရီးစဉ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ဒီလို ရေပေါ်ဟိုတယ် သုံးခု အတွေ့အကြုံနဲ့ အခြားကန်ချနာဘူရီလည်ပတ်စရာအချို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာက “သုခလမ်းညွှန်” ခရီးသွားလုပ်ငန်းပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် တစ်ဦးကို USD 500 ပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ခ က လွဲရင် အကုန်အပြီးအစီး ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ခကတော့ ကိုယ်သွားမဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်လို့ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တာကြောင့် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြထားတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ MNA လေယာဉ်နဲ့ မနက်အသွား၊ အပြန်ညနေ စီစဉ်လိုက်တာ အဆင်အတော်ပြေတယ်။ သောကြာမနက်သွား၊ တနင်္လာညနေ ပြန်လာခဲ့တာ။ အသွားအပြန်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ပဲ ကျသင့်ပါတယ်။ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ကုန်ကျနိုင်မဲ့ ပမာဏက ဒေါ်လာ ၇၀၀ လောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ တခြားလက်ဆောင်ဝယ်၊ ဈေးဝယ်တာတော့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့လေ။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အသေးစိတ်ကို သုခလမ်းညွှန် Travels & Tours ဖုန်း 09 977906671 နဲ့ 09 969703337 တို့ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
နွေရာသီကို တမူထူးခြားစွာ အပန်းဖြေချင်သူတိုင်းအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကန်ချနာဘူရီ ရေပေါ်ဟိုတယ် ခရီးစဉ်တွေက ဒီနှစ်အတွက် ရေပန်းစားလာဦးမဲ့ ခရီးစဉ်တွေလို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားရင် Like & Share လေး လုပ်ပြီး အားပေးပါဗျား။ စိတ်ဝင်စားစရာ ခရီးစဉ်နဲ့ လည်ပတ်စရာအကြောင်းအရာတွေကို ဆက်ပြီးလည်း တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာပါ။